Madaxweyne Xilka Hayey 30 Sano oo Sheegay Inuusan Waligii Xanuunsan – Radio Daljir
Agoosto 2, 2017 6:18 b 0
Madaxweynaha Uganda Yoweri Musavani oo haatan 63 jir ah ayaa sheegey in waligiis uusan xanuunsanin intii uu madaxweynaha ahaa.
Musaveni oo talada dalkiisa hayey muddo 31 sano ah ayaa dadka weydiiyey iney weligood maqleen xanuunkiisa ama inuu isbitaal jiifo.
“Waligaa miyaad maqashay Musaveni ayaa xanuunsaday oo isbtitaal yaalla, 31kii sano ee la soo dhaafay? Maxaa yeelay waxaan raacaa xeelado caafimaad taasoo ugu dambeystii caawiso ka hor tagga cuduradaas. Qeyb badan oo cuduradaas ka mid ah waa laga hor tagi karaa” ayuu yiri Musaveni.
Hadalkan ayaa dad badan ula muuqda mid layaab ah marka la eego tirada madaxweynayaasha ee xanuunsan sanadkan oo kaliya.
Madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe oo talada dalkaasi qabtay 1980kii ayay mucaaradku ku dhaliilaan inuu dalka ka maamulo Sariirtiisa isbitaalka dusheeda, ka dib markuu saddex jeer uu sanadkan oo kaliya safar caafimaad ku tagay dalkaSingapore.
Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa muddo dheer London u jooga daweynta xanuun aan nuuciisa wali la shaacin, Madaxweynayaasha Angola, Zimbabwe, Benin iyo Algeria ayaa safaro caafimaad ugu baxay dalka dibadiisa sanadkii la soo dhaafay.
Madaxweynaha Dowladda Puntland oo Shacabka Kala Qaybgalay Xuska 1da Agoosto (Sawirro)